यी ४ राशी भएको ब्यक्तिहरु, जसले जस्तो सुकै दुखमा पनि दिन्छन् साथ ! यी राशीको सङ्गत गर्नुस् – PanchKhal Online
Home/राशिफल/यी ४ राशी भएको ब्यक्तिहरु, जसले जस्तो सुकै दुखमा पनि दिन्छन् साथ ! यी राशीको सङ्गत गर्नुस्
यी ४ राशी भएको ब्यक्तिहरु, जसले जस्तो सुकै दुखमा पनि दिन्छन् साथ ! यी राशीको सङ्गत गर्नुस्
काठमाडौँ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार १२ वटा राशीहरुमध्ये प्रत्येकमा ग्रहहरुको असर फरक फरक हुन्छ ।सोही अनुसार मानिसहरुको ब्यवहारमा पनि फरकपन आउँछ । अर्थात हरेक राशीको ग्रह र नक्षत्रको आधारमा फरक फरक बानी ब्यवहार हुन्छ ।त्यसमध्येको आज हामी जस्तो सुकै दुखमा पनिसाथ नछोड्ने ४ राशीको बारेमा कुरा गदै छौँ ।जो दुखमा आतिदैनन् र सुखमा पनि मातिदैनन् ।हेर्नुस् कुन कुन राशी हुन् ?
मेश राशी हुने ब्यक्तिहरु जीवनमा सधै सकरात्मक सोच लिएर हिड्ने भएकाले दुख र सुख बुझेका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरु दुखमा परेका ब्यक्तिलाई सधै साथ दिन तयार हुन्छन् । सोही अनुरुप उनीहरु भविष्यमा एक सफल ब्यक्ति बन्दछन् ।
कन्या राशी भएको ब्यक्तिहरु बाहिरबाट हेर्दा जति शान्त स्वभावका देखिन्छन् ,भित्री मनबाट समेत निकै समझदार हुन्छन् । यो राशी भएको ब्यक्तिहरु निकै मिहेनती भएकाले सफल ब्यक्ति बन्दछन् । त्यसैले दुख र सुख के हो भनेर बुझेकाले अप्ठ्यारोमा परेका मानिसहरुलाई सधै साथ दिन्छन् । यो राशी भएको मानिसहरु मनमा जस्तो सुकै दुख,पिडा भएपनि लुकाएर हाँस्ने स्वभावका हुन्छन् ।
कुम्भ राशी भएका मानिसहरु पनि एकदमै आत्माविश्वासी र निडर स्वाभावका हुन्छन् । जसले गर्दा दुख परेका मानिसलाई साथ र हात दिन कहिल्यै पछि हट्दैनन् । साथै आफु अन्याय पनि सहन सक्दैन् , कसैमाथि अन्याय भएमा पनि औला उठाउँछन् ।
मकर राशी भएका मानिसहरु सानैदेखि सकरात्मक सोचका भएकाले दुख र सुखलाई समान महत्व दिन्छन् । त्यसैले यो राशी भएकाहरु सानो तिनो दुखमा कहिल्यै पनि निराश हुदैनन् । अझ अरुलाई सम्झाई बुझाई गरेर पिडालाई भुलाउने काम गर्छन् । तर यो राशी अन्य राशीहरु भन्दा केही फरक स्वभावका हुन्छन् ।
बिहानै मनकामना मन्दिरको दर्शन गरि हेर्नुहोस तपाइको आजको राशिफल
आजको राशिफल : भदाै ८ गते आइतबार
आज २०७६ साउन ३१ गते शुक्रबारको राशिफल
आज २०७६ भदौ ६ गते शुक्रबारको राशिफल
आज २०७६ भदौ २ गते सोमबारको राशिफल